ချွေးမနှင့်သမီးအရင်းကို အမေကဆက်ဆံပုံ…! - Barnyar Barnyar
April 11, 2021 linn htet Life Style 0
သမီးက ယောက္ခမအိမ်မှာ ပျော်နေရင် ဒါကို ပျော်တယ်လို့ အသိမှတ်ပြုကြတယ် ။ ချွေးမက ယောက္ခမအိမ်မှာ ပျော်နေရင်တော့ သဝန်တိုကြတယ်… သားမက်က သမီးကို ကူညီရင်တော့ ကောင်းတယ်တဲ့ သားက ချွေးမကို ကူညီရင်တော့ မယားကြောက်တဲ့…
သမီး နည်းနည်းလေးဖျားရင် စိတ်ထိခိုက်ကြတယ်။ ချွေးမ နေမကောင်းရင်တော့ ဟန်ဆောင်တာတဲ့ သမီးအားအင် ချိနဲ့သွားရင် ဒါယောက္ခမအိမ်က လူတွေကြောင့်တဲ့ ချွေးမအားအင် ချိနဲ့သွားရင် စားတာ သောက်တာတော့ တအားပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာမထင်တာတဲ့…
သမီးက တနေကုန် ယောက္ခမအိမ်မှာ အလုပ် လုပ်ရရင် စိတ်မကောင်းကြဘူး ။ ဒါပေမယ့်…. ချွေးမ တနေကုန် အလုပ် လုပ်ရင်တောင် အလုပ်သူခိုးတဲ့ သမီးက ယောက္ခမနှင့် မက်တွေ ယောင်းမတွေရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပေးရရင် ဒေါသထွက်ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့်….. ချွေးမကြတော့ တစ်ယောက်တည်း တစ်အိမ်လုံးအလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းကြတယ် ။ သမီးရဲ့ယောက္ခမအိမ်က မကောင်းပြောတဲ့အခါ မခံနိုင်ကြဘူး ဒါပေမယ့်…… ကိုယ်တိုင်က ချွေးမအိမ်က လူတွေကို ဆဲဆိုနေကြတယ် ။
သမီးကို ယောက္ခမအိမ် ပို့ချိန်တော့ ငါဘုရင်မ လွတ်လိုက်တာနော်တဲ့ ။ ဒါပေမယ့်….. ချွေးမရှာတော့ အောက်သက်ကြေတဲ့ ကောင်မလေးတဲ့ ဟူး….စိတ်လေးစရာတွေပဲနော် ကိုယ့်ငချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ် ထင်ကြတယ်။ ပြင်လိုက်ကြပါ ။
အမေသမီးက အမေ့အိမ်သူ အိမ်သားတွေကို စွန့်ခွာပြီး သူများအိမ် သွားနေသလို….. အမေ့ချွေးမကလည်း အဲ့လိုပဲလေ အမေ သူများသမီးကို သမီးအရင်လို သတ်မှတ်ရင် သူများကလည်း အမေ့သမီးကို သမီးအရင်းလို သတ်မှတ်လိမ့်မယ်။
Unicode ဖွငျ့ ဖတျရနျ
သမီးက ယောက်ခမအိမျမှာ ပြျောနရေငျ ဒါကို ပြျောတယျလို့ အသိမှတျပွုကွတယျ ။ ခြှေးမက ယောက်ခမအိမျမှာ ပြျောနရေငျတော့ သဝနျတိုကွတယျ… သားမကျက သမီးကို ကူညီရငျတော့ ကောငျးတယျတဲ့ သားက ခြှေးမကို ကူညီရငျတော့ မယားကွောကျတဲ့…
သမီး နညျးနညျးလေးဖြားရငျ စိတျထိခိုကျကွတယျ။ ခြှေးမ နမေကောငျးရငျတော့ ဟနျဆောငျတာတဲ့ သမီးအားအငျ ခြိနဲ့သှားရငျ ဒါယောက်ခမအိမျက လူတှကွေောငျ့တဲ့ ခြှေးမအားအငျ ခြိနဲ့သှားရငျ စားတာ သောကျတာတော့ တအားပဲ။ ဒါပမေယျ့ အရာမထငျတာတဲ့…
သမီးက တနကေုနျ ယောက်ခမအိမျမှာ အလုပျ လုပျရရငျ စိတျမကောငျးကွဘူး ။ ဒါပမေယျ့…. ခြှေးမ တနကေုနျ အလုပျ လုပျရငျတောငျ အလုပျသူခိုးတဲ့ သမီးက ယောက်ခမနှငျ့ မကျတှေ ယောငျးမတှရေဲ့အလုပျကို လုပျပေးရရငျ ဒေါသထှကျကွတယျ ။
ဒါပမေယျ့….. ခြှေးမကွတော့ တဈယောကျတညျး တဈအိမျလုံးအလုပျကို လုပျခိုငျးကွတယျ ။ သမီးရဲ့ယောက်ခမအိမျက မကောငျးပွောတဲ့အခါ မခံနိုငျကွဘူး ဒါပမေယျ့…… ကိုယျတိုငျက ခြှေးမအိမျက လူတှကေို ဆဲဆိုနကွေတယျ ။
သမီးကို ယောက်ခမအိမျ ပို့ခြိနျတော့ ငါဘုရငျမ လှတျလိုကျတာနျောတဲ့ ။ ဒါပမေယျ့….. ခြှေးမရှာတော့ အောကျသကျကွတေဲ့ ကောငျမလေးတဲ့ ဟူး….စိတျလေးစရာတှပေဲနျော ကိုယျ့ငခဉျြ ကိုယျခဉျြတယျ ထငျကွတယျ။ ပွငျလိုကျကွပါ ။
အမသေမီးက အမအေိ့မျသူ အိမျသားတှကေို စှနျ့ခှာပွီး သူမြားအိမျ သှားနသေလို….. အမခြေှ့ေးမကလညျး အဲ့လိုပဲလေ အမေ သူမြားသမီးကို သမီးအရငျလို သတျမှတျရငျ သူမြားကလညျး အမသေ့မီးကို သမီးအရငျးလို သတျမှတျလိမျ့မယျ။
ကွမ်းစားတဲ့ သူတွေ ကျောက်ကပ် ရောဂါမဖြစ်အောင် မုန်လာဥဖြူ နဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်းလေး
Visit Today : 1887
This Month : 1887
This Year : 54587
Total Visit : 54587
Hits Today : 9015
Total Hits : 318723